လေယာဉ်လက်မှတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် - အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်၏ပျံသန်းမှု
ရှာပါ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအကောင်းဆုံးပျံသန်းမှု အင်တာနက်ပေါ်ရှိပျံသန်းမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းစာမျက်နှာများကြောင့်ခရီးသည်များစွာသည်သက်သာစွာဖြင့်သက်သာစေရန်အတွက်အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါစျေးပေါသောလေယာဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အာမခံချက်အားလုံးဖြင့်ရှာ။ ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပြီး Absolut Viajes မှကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤရွေးချယ်စရာမျှသာမဟုတ်ပါ၊ အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာများလည်းပါ ၀ င်သည်။ အကောင်းဆုံးကဘာလဲ ကောင်းပြီ၊ ခရီးသွားတိုင်းမှာသူတို့အကြိုက်ဆုံးစာမျက်နှာတွေရှိတာမို့ဒီမှာငါတို့အကြိုက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြမယ်။
သင်တန်း: ကျော်ကြားသောအွန်လိုင်းခရီးသွားအေဂျင်စီသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပျံသန်းမှုအမျိုးမျိုးကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းသည် ဒီမှာနှိပ်ပါ.
eDreamsဖြေ။ ။ စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ကိုသင်လိုချင်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခု ဒီမှာနှိပ်ပါ.
Skyscanner ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးလေယာဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောရွေးချယ်စရာများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ သင်ရှာဖွေနေသည့်ခရီးစဉ်ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာဖွေပါ ဒီမှာနှိပ်ပါ.
ကိုဖမ်း။ ဤရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြောင့်သင်ထောင်နှင့်ချီသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုရှာဖွေနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ င်ရန်နှင့်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် ဒီမှာနှိပ်ပါ
Liligoဖြေ။ Liligo မှာအာမခံချက်အားလုံးနဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြိုတင်မှာယူရန်လိုအပ်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
နောက်ဆုံး သငျသညျပျံသန်းမှု၏ကျယ်ပြန့ပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာရိုက်ပါ သင်ရှာဖွေနေသောလေယာဉ်ကိုရှာဖွေရန်စျေးနှုန်းအားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။
အလုံခြုံဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းမှာလေယာဉ်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်လာမယ့်ခရီးကိုကျွန်တော်တို့စနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများခွင့်ပြုသကဲ့သို့နေရာများသည်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်ဖို့လိုတဲ့နေရာကိုရှာတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကြည့်ခြင်း လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ.
အကယ်၍ အားလပ်ရက်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောဘတ်ဂျက်ကိုချန်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အမြဲတမ်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များပေါ်တွင်အခြေခံရမည်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့တွင်သင်ရရှိနိုင်သောအားသာချက်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးများရှိသည် တန်ဖိုးနည်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များနီးပါးစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ။
ဒါကြောင့်မှကြွလာသောအခါအကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများတစ်ခုမှာ အွန်လိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်, မည်သူမဆို၏အကူအညီမပါဘဲ, အငြိမ့်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအချိန်များစွာပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်မှပေးသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်။ ဖတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလွန်အသေးစိတ်ရှာဖွေပါဖြေ - ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့ပေးတဲ့ငါတို့လို search engine ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိရမယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးလွန်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်ကိုအတိအကျသိရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအရာတစ်ခုခု။ က ကောင်းသော search engine ၎င်းသည်မူလမှသည် ဦး တည်ရာသို့ဖြည့်ရန်အကွက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ထွက်ခွာခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာထိုင်ခုံတွေကျန်နေသေးတဲ့စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာပါ။
Ofertasသေချာတာပေါ့၊ ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းထိုနေ့၏အမိန့်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုကြည့်ခြင်းသည်မထိခိုက်ပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့အတွက်, နောက်ဆုံးစွဲချက်ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်, စျေးနှုန်းတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းချက်များဖြင့်သယ်ဆောင်သွားခြင်းမပြုရ။ ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စာကိုကောင်းစွာမဖတ်ဘဲမနေပါနှင့်။
စိတ်နှင့်နှစ်သိမ့်မှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးကိုအိမ်ကလုပ်မှာပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အချိန်ပိုများလာရင်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ သာယာအေးချမ်းစွာလမ်းပြနိုင်လိမ့်မည်။ ပျံသန်းမှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ် ငါတို့ကိုတင်ပြကြသည်ကမ်းလှမ်းမှုအဖြစ်။ သင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်အတွက်လိုအပ်သမျှကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
အရင်ကငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်တို့လည်ပတ်ချင်တဲ့နေရာကိုစဉ်းစားနေသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့မြင်ယောင်ကြည့်ပြီးသောအခါစျေးပေါသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုမည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေ - အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် လေယာဉ်အပေးအယူ။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်လူကြိုက်များပြီးခရီးသွား dest ည့်နေရာများကိုရွေးချယ်သောအခါစျေးနှုန်းများတက်လာမည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ထိုနည်းတူစွာပင်အချိန်ကာလအမြင့်ဆုံးရောက်ချိန်နှင့်စျေးနှုန်းအပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေယာဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြင့်သင်မစဉ်းစားသောနေရာများနှင့်အလွန်ကြီးသောစျေးနှုန်းများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သယ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ထူးခြားသောနေရာများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နည်းလမ်း။
လေယာဉ်ကိုစောစောလားနောက်ကျလား။ဖြေ - ဒီမေးခွန်းအတွက်သံသယအမြဲရှိနေတယ်။ ဖြေရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်ကြိုတင်ကြိုတင်မှာထားခြင်းနှင့်အလွန်နောက်ကျခြင်းတို့ကလက်မှတ်၏စျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရဆိုလျှင်အစောဆုံးကာလ၌လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကစာရင်းသွင်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နောက်ဆုံးပေါ်, သင်၏ခရီးစဉ်မစတင်မီသုံးလေးပတ်ခန့်အကြောင်းကို။ အေဂျင်စီ၏ကိန်းဂဏန်းများအရလေယာဉ် ၀ ယ်ရန်အချိန်တိုအတွင်းမှာ ၅၅ ရက်မတိုင်မီအချိန်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်ပြီးနောက်, နှုန်းထားများနောက်တဖန်တက်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းနိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။
အကြေးခွံတစ်ခါတစ်ရံစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်တန်ဖိုးနည်းသောလေယာဉ်များရှာဖွေရန်နောက်ထပ်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောနေရာများရှိသည်မှာသေချာသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားတစ်နေရာသို့ ဦး တည်သွားစေသော်လည်းအရေးကြီးသောအချက်မှာ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့မသိသောထိုနေရာတွင်ပျောက်ဆုံးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်နောက်တစ်ကြိမ်မထွက်ခွာမီကျွန်ုပ်တို့အားကြည့်ရှုရန်အချိန်ပေးလိမ့်မည်။
ခြော, လေယာဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရှာဖွေရေးမှာပိုပြီးတိကျဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လေးထောင့်ကွက်တွေရှိလို့ပဲ။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်ဇာစ်မြစ်ကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အနီးဆုံးလေဆိပ်အပြင်သင့်မြို့၏အမည်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အလားတူပဲ၊ သင် ဦး တည်ရာနှင့်အတူတူပါပဲသင်ပြုရပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ရထိုက်သောအားလပ်ရက်ကိုသင်ပျော်မွေ့မည့်နေရာ။
ဒီဟာကိုဖြည့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ပျံသန်းတဲ့နေ့တွေကိုသွားတွေ့ရမယ်။ ပြက္ခဒိန်ကိုပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ကိုသာရွေးရမည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် တစ်လမ်းသို့မဟုတ်ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်။ ရိုးရိုးလေးလား ကောင်းပြီ, "Search" ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်ရွေးချယ်မှုအားလုံး၏အသေးစိတ်ရွေးချယ်မှုပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင့်အားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးပျံသန်းမှုကိုပေးသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်အမျိုးမျိုး။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးကိုနှိုင်းယှဉ်။ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ အဓိကနေရာများမှာလန်ဒန်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ကိုသိရှိလာကြသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုချင်သည့်အချိန်တိုင်းလန်ဒန်သို့စျေးပေါသောလေယာဉ်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများစွာရှိပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှလေကြောင်းလိုင်းအားလုံးနှင့်သူတို့၏အချိန်ဇယားနှင့်နှုန်းထားများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ Vueling၊ Ryanair သို့မဟုတ် Air Europa တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်သည်အဓိကလေဆိပ်များမှထွက်ခွာပြီးတစ်နေ့တာနာရီပေါင်းများစွာတွင်ရှိသည်။ သင်မသွားရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ
အလားတူပင်စပိန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်သည်လည်းများစွာသောလည်ပတ်မှုများရရှိသည်။ မက်ဒရစ်သို့ပျံသန်းခြင်းများသည်များသောအားဖြင့်စျေးသက်သာသည် နံနက်ယံ၌ပထမ ဦး ဆုံးအရာစွန့်ခွာ။ ထို့အပြင်အပြီးသတ်စျေးနှုန်းလျှော့ချမှုကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်ရက်များလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တစ်နာရီကျော်အကြာ၌သင်သည်သင်သွားလိုရာသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ဘာစီလိုနာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဲလ်ပရက်လေဆိပ်နှင့်တွေ့မည်။ ၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်ခရီးစဉ်နှင့်ခရီးသည်များသည်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသည်။ ၎င်းတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်ဇုန် (၃) ခုအပြင်ဆင်းသက်နိုင်သောဇုန်လည်းရှိသည်။ ၎င်းတွင်နိုင်ငံပိုင်နှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများစွာပါ ၀ င်သဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသွားလိမ့်မည် အမြဲတမ်းတန်ဖိုးနည်းပျံသန်းမှုကိုရှာဖွေပါ.
မသန်စွမ်း ပဲရစ်သို့ပျံသန်းကျွန်ုပ်တို့တွင် Iberia, Air Europa, British Airway သို့မဟုတ် Vueling ကဲ့သို့ကွဲပြားသောကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်း ဦး တည်ရာနှင့်ဆိုက်ရောက်areaရိယာပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ပဲရစ်တွင်လေဆိပ်သုံးခုရှိသည်။ ချားလ်စ်က de Gaulle, Orly နှင့် Beauvais ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာဗဟိုမှချိတ်ဆက်။
သငျသညျလိုလျှင် ရောမမြို့သို့ပျံသန်း၄ င်းမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သိဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်၏ visit ည့်သည်အသွားအလာသည်နှစ်စဉ်တိုးပွားလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၀ င်ငွေနည်းသည့်ကုမ္ပဏီများမှာ Vueling၊ Ryanair သို့မဟုတ် Easyjet ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို, သင်အမြဲရှာနိုင်သည် ထက်နည်း 30 ယူရိုများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သာလက်အိတ်သယ်ဆောင်သည်။ ဘာစီလိုနာ၊ အိုင်ဘီဇာ၊ မက်ဒရစ်နှင့်ဆဗီးလ်တို့သည်ရောမသို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းရန်အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။